Tikniyoolajiyad cusub oo lagu garto wajiga waxaa soo bandhigi doonta shirkadda Sony | Androidsis
Sony waxay ka shaqeyneysaa a jiil cusub oo tiknoolajiyad aqoonsi wajiga ah kaas oo laga heli karo taleefannadaada dhammaadka 2019.
Macluumaadkan waxaa cadeeyay usbuucii la soo dhaafay Madaxa Qaybta Dareenka ee Sony, Satoshi Yoshihara. Wuxuu ka dhawaajiyay inay shirkaddu soo saartay a dareemayaal cusub oo 3D ah oo loogu talagalay kamaradaha hore iyo gadaal iyo inay isku dayayaan inay kordhiyaan wax soo saarka.
Nidaamka aqoonsiga wajiga ee 'Face ID' ee Apple ayaa guul weyn laga gaaray, iyadoo la tixgelinayo heerka korsashada tiknoolajiyada la midka ah ee ka dhex dhacday taleefannada casriga ah. Nasiib darrose, kuwa ku jira taleefannada Android, oo ay ku jiraan calanka sida Huawei Mate 20 Pro, uma saxsana sida kuwa shirkadda Mareykanka.
Dhowr taleefan oo sameeyeyaal ah ayaa muujiyey xiisaha ay u qabaan tikniyoolajiyadda soo socota Sony ayaa hadda ka shaqeyneysa nce markaa baahida loo qabo in la dedejiyo wax soo saarka. Maamulka Sony wuxuu sheegay, iyo waxyaabo kale, waxyaabaha soo socda:
Kaamirooyinka ayaa isbeddelay taleefannada, wixii aan ku soo arkayna, waxaad ka filaysaa isla nidaamkan 3D. Xawaaruhu wuu ku kala duwanaan doonaa berrinka, laakiin waxaan hubaal arki doonnaa korsashada 3D. Waan hubaa taas ".
Kaamirooyinka 3D waxay u badan tahay inay qabtaan shaqooyin kala duwan, laakiin awood u siinta aqoonsiga wajiga waa inay noqotaa muujinta ugu weyn. Aqoonsiga wajiga ee '3D' wuxuu balan qaadayaa inuu xitaa ka saxsan yahay laguna kalsoonaan karo baaritaanka 3D ee Apple ku soo bandhigtay Face ID iyo kuwa sameeya taleefannada sida Huawei iyo Xiaomi inay soo daabaceen. Qaabka waxqabadka ee aqoonsigan wajiga 3D wuxuu si weyn uga duwanaan doonaa kan Face ID, Taas oo ku wareegsan meelaha laga soosaarayo iftiinka aan la arki karin ee wejiga isticmaalaha iyo cabirista cilladaha ku jira shabakaddaas.
Tikniyoolajiyada aqoonsiga wajiga ee mustaqbalka ee Sony waxay ka shaqeyn kartaa dhowr mitir fog
Kaamirooyinka cusub ee 3D ee XNUMXD waxay adeegsadaan astaamaha leysarka garaacaya waxayna cabbiraan inta ay ku qaadanayso garaaca wadnaha inuu soo kabsado Tani waa la barbardhigi karaa sida fiidmeerta ay u adeegsadaan echolocation-ka duurka.
Sida laga soo xigtay Sony, qaabkan cusub wuxuu abuurayaa tusaalooyin faahfaahsan oo wajiga isticmaaleha iyo kan kara shaqeeya ilaa 16 fuudh (5 mitir). Shirkaddu waxay mar hore martigelisay degel loogu talagalay dareenka qoto dheer halkaas oo booqdayaashu ay sahamin karaan fursadaha tikniyoolajiyadda cusub iyo barnaamijyadeeda kala duwan ee isugu jira gawaarida iswada, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, aalado iyo waxyaabo kale oo badan.
Soo-saarista kamaradda dareeraha 3D ayaa loo qorsheeyay inay bilaabato xagaaga dambe 2019. Sidaa darteed, dareemayaasha waxaa laga heli karaa calanka la bilaabi doono dhamaadka 2019 iyo sanadka soo socda. Tani waxay kor u qaadi kartaa dakhliga shirkadda, taas oo loo aado in muddo ah ma fiicnayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Sony waxay soo bandhigeysaa nidaamka aqoonsiga wajiga adduunka ee ugu horumarsan taleefannada
Waa maxay sababta taleefanka Android uu u isticmaalo batteri badan marka uu shaqo la'aan yahay